Warfaafinta Madaxtooyada iyo madaxda SONNA oo ka wada hadlay qorshaha baahineed ee Wakaaladda wararka Qaranka Soomaaliyeed+Sawirro – Radio Muqdisho
Warfaafinta Madaxtooyada iyo madaxda SONNA oo ka wada hadlay qorshaha baahineed ee Wakaaladda wararka Qaranka Soomaaliyeed+Sawirro
Agaasimaha Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed (SONNA) Mudane; C/laahi Sheekh C/raxmaan (Heybe) oo Xarunta Madaxtooyada kula kulmay Agaasime kuxigeenka Warbaahinta Madaxtooyada Mudane; Cabdirishiid Maxamed Xaashi iyo Saraakiil ka tirsan Xafiiska.
Mas’uuliyiinta ayaa ka wada hadlay sidii loo dardar gelin lahaa baahinta xogta ku saabsan dib u dhiska iyo horumarinta Dalka.
Sidoo kale, kulanka waxaa lagu muujiyey muhiimadda ay leedahay in Shacabku ay si dhaw ula socdaan xogta ku saabsan dalka, duruufaha ku xeeran Dowladnimadeenna iyo tallaabooyinka horumarineed ee ay wadajirka uqaadayaan Shacabka iyo Dowladdooda.
Agaasimaha Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta Wakaaladda iyo hey’adaha Dowladda, maadaama ay aas-aas u tahay haqab tirka baahida shacabku ay u qabaan ogaanshaha wararka iyo qorsheyaasha Dowladda.
Dhankiisa, Agaasime Kuxigeenka Warbaahinta Madaxtooyada Mudane; Cabdirishiid Maxamed Xaashi ayaa adkeeyey sida ay uga go’an tahay Madaxtooyada sara u qaadidda tayada Warbaahinta Dowladda iyo midda gaarka loo leeyahay, si kor loogu qaado wacyiga shacabkeenna ee dowladnimada, dimuqraadiyadda iyo horumarka.
Taliska Booliska oo amar kasoo saaray dadka hubka ku dhexwata Dhuusamareeb
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo soo dhoweeyay dhiggiisa Dalka Jabuuti+Sawirro